အောင်မြင်မှုတွေ ရယူဖို့ ဘာနေဗျူးမြေကို မာရီယာနို တစ်ကျော့ပြန်လာခဲ့ပြီ
အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ဖို့ရှိနေတဲ့ မာရီယာနို Mariano နဲ့ ရီးယဲလ်တို့ရဲ့ ပေါင်းစည်းမှု
30 Aug 2018 . 2:43 PM
မက်ဒရစ်မြေကို (၁၄)လကြာ ခွဲခွါခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ မာရီယာနို Mariano ဟာ သူ့ လူငယ်ကစားသမားဘ၀ စတင်ရာ ဘာနေဗျူးကွင်းကြီးကို တစ်ကျော့ပြန်ခြေချခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ရင်ခွင်ကို ခဏတာ ခွဲခွါခဲ့ပြီး (၁)ရာသီအကြာမှာပဲ အသင်းဟောင်းဆီ (၅)နှစ်စာချုပ်နဲ့ ပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လိုင်ယွန်အသင်းဆီ မာရီယာနိုကို ယူရို(၈)သန်းနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပြီး အခု သူ့အတွက် ဆုကြေးအပါအ၀င် ယူရို(၂၃)သန်းအထိ ပေးချေရမှာဖြစ်ပေမယ့် မာရီယာနိုရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်း၊ အသက်အရွယ်အရ အကောင်းဆုံးအနေအထား ရောက်ရှိနေလို့ လက်ရှိစေျးကွက်အတွင်း သူ့လို ကစားမျိုးကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် ငွေတွေ အများကြီးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပမာဏက တန်တယ်လို့တောင် ပြောရမယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းကလည်း တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် မာရီယာနိုဟာ ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ တောက်ပလာမယ့်သူလို့ သတိပြုမိတာကြောင့် လိုင်ယွန်အသင်းဆီ ရောင်းကတည်းက သူတို့ ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် လိုင်ယွန်အသင်းက ရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ Buy-Back Clause ကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။ လိုင်ယွန်အသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ တစ်ရာသီကျော်ကာလအတွင်း (၂၁)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တဲ့ သူ့ကို လိုင်ယွန်အသင်းက လက်မလွှတ်လိုပေမယ့်လည်း စာချုပ်စည်းမျဉ်းအရ အောင့်သက်သက်နဲ့ ရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်ကစားသမားဘ၀ကို အက်စ်ပန်ညို၊ Premià ၊ Sánchez Llibre ၊ Badalona စတဲ့ အသင်းတွေမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရီးယဲလ်အကယ်ဒမီကို စရောက်ခဲ့တယ်။ မက်ဒရစ်မြို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိုဖြစ်နေတဲ့ ကတ်တလန်ဒေသ၊ ဘာစီလိုနာမှာ မွေးဖွားခဲ့သူ မာရီယာနိုအတွက် အရာအားလုံးက စိန်ခေါ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ သူ့ကို ရီးယဲလ်စီနီယာအသင်းဆီ ရောက်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သူကတော့ နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်း Zidane ပါပဲ။ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းကြီးအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၄)ပွဲကစား၊ (၅)ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး မာရီယာနိုက သူ့ရဲ့အစွမ်းကို ပြသခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြသစ် လိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui က မာရီယာနိုကို ပြန်ခေါ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အဓိက တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့ပြီး နာမည်ကျော်ကစားသမား တစ်ဦးမှ ပြန်မခေါ်ဘဲ လူငယ်ကစားသမားတွေကိုသာ ဦးစားခေါ်ယူထားတယ်။ လိုပယ်တက်ဂီဟာ နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်းလိုပဲ နာမည်ကြီးတွေထက် လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့သာ အသင်းကို တည်ဆောက်မယ့်အနေအထားရှိနေပြီး အခုအချိန်မှာလည်း လူငယ်တော်တော်များများ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်းနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုခေတ်လွန် ရီးယဲလ်အသင်း လာလီဂါမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေပြီး အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးနေရာကနေ ဦးဆောင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်ခံရတာတွေကို ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ချေဖျက်ဖုိ့ လိုအပ်နေဆဲပါ။ အဲဒီအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိအောင် မာရီယာနိုအပါအ၀င် ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေက စွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာ . . . .
အပေါငျးလက်ခဏာ ဆောငျဖို့ရှိနတေဲ့ မာရီယာနို Mariano နဲ့ ရီးယဲလျတို့ရဲ့ ပေါငျးစညျးမှု
မကျဒရဈမွကေို (၁၄)လကွာ ခှဲခှါခဲ့ရပွီးနောကျမှာတော့ မာရီယာနို Mariano ဟာ သူ့ လူငယျကစားသမားဘ၀ စတငျရာ ဘာနဗြေူးကှငျးကွီးကို တဈကြော့ပွနျခွခေခြဲ့ပါပွီ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ရငျခှငျကို ခဏတာ ခှဲခှါခဲ့ပွီး (၁)ရာသီအကွာမှာပဲ အသငျးဟောငျးဆီ (၅)နှဈစာခြုပျနဲ့ ပွနျရောကျလာခဲ့တာပါ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လိုငျယှနျအသငျးဆီ မာရီယာနိုကို ယူရို(၈)သနျးနဲ့ ရောငျးခခြဲ့ပွီး အခု သူ့အတှကျ ဆုကွေးအပါအဝငျ ယူရို(၂၃)သနျးအထိ ပေးခရြေမှာဖွဈပမေယျ့ မာရီယာနိုရဲ့ လကျရှိခွစှေမျး၊ အသကျအရှယျအရ အကောငျးဆုံးအနအေထား ရောကျရှိနလေို့ လကျရှိစေးကြှကျအတှငျး သူ့လို ကစားမြိုးကို ချေါမယျဆိုရငျ ငှတှေေ အမြားကွီးပေးရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီပမာဏက တနျတယျလို့တောငျ ပွောရမယျ။
ရီးယဲလျအသငျးကလညျး တဈခြိနျခြိနျကရြငျ မာရီယာနိုဟာ ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ တောကျပလာမယျ့သူလို့ သတိပွုမိတာကွောငျ့ လိုငျယှနျအသငျးဆီ ရောငျးကတညျးက သူတို့ ပွနျချေါမယျဆိုရငျ လိုငျယှနျအသငျးက ရောငျးရမယျဆိုတဲ့ Buy-Back Clause ကိုပါ တဈခါတညျး ထညျ့သှငျးခဲ့တာပါ။ လိုငျယှနျအသငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ တဈရာသီကြျောကာလအတှငျး (၂၁)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တဲ့ သူ့ကို လိုငျယှနျအသငျးက လကျမလှတျလိုပမေယျ့လညျး စာခြုပျစညျးမဉျြးအရ အောငျ့သကျသကျနဲ့ ရောငျးခခြဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
လူငယျကစားသမားဘဝကို အကျဈပနျညို၊ Premià ၊ Sánchez Llibre ၊ Badalona စတဲ့ အသငျးတှမှော ဖွတျသနျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ ရီးယဲလျအကယျဒမီကို စရောကျခဲ့တယျ။ မကျဒရဈမွို့နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျလိုဖွဈနတေဲ့ ကတျတလနျဒသေ၊ ဘာစီလိုနာမှာ မှေးဖှားခဲ့သူ မာရီယာနိုအတှကျ အရာအားလုံးက စိနျချေါမှုတှေ အပွညျ့နဲ့ပါ။ သူ့ကို ရီးယဲလျစီနီယာအသငျးဆီ ရောကျအောငျ လမျးဖှငျ့ပေးခဲ့သူကတော့ နညျးပွဟောငျး ဇီဒနျး Zidane ပါပဲ။ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ ရီးယဲလျအသငျးကွီးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၄)ပှဲကစား၊ (၅)ဂိုး သှငျးယူခဲ့ပွီး မာရီယာနိုက သူ့ရဲ့အစှမျးကို ပွသခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွသဈ လိုပယျတကျဂီ Lopetegui က မာရီယာနိုကို ပွနျချေါဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အဓိက တိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့ပွီး နာမညျကြျောကစားသမား တဈဦးမှ ပွနျမချေါဘဲ လူငယျကစားသမားတှကေိုသာ ဦးစားချေါယူထားတယျ။ လိုပယျတကျဂီဟာ နညျးပွဟောငျး ဇီဒနျးလိုပဲ နာမညျကွီးတှထေကျ လူငယျကွယျပှငျ့တှနေဲ့သာ အသငျးကို တညျဆောကျမယျ့အနအေထားရှိနပွေီး အခုအခြိနျမှာလညျး လူငယျတျောတျောမြားမြား ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ ဇီဒနျးနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုခတျေလှနျ ရီးယဲလျအသငျး လာလီဂါမှာ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနပွေီး အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးနရောကနေ ဦးဆောငျနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ရီးယဲလျအသငျး ရငျဆိုငျရမယျ့ စိနျချေါမှုတှေ၊ သံသယမကျြလုံးတှနေဲ့ စောငျ့ကွညျ့ခံရတာတှကေို ဆုဖလားအောငျမွငျမှုတှနေဲ့ ခဖြေကျြဖုိ့ လိုအပျနဆေဲပါ။ အဲဒီအောငျမွငျမှုတှေ ရရှိအောငျ မာရီယာနိုအပါအဝငျ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ လူငယျကစားသမားတှကေ စှမျးဆောငျနိုငျမလားဆိုတာ . . . .